မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ဟောင်ကောင် ခရီးစဉ် - အပိုင်း ၁
မနက်၃နာရီခွဲလောက်မှာပဲ ကျွန်မနိုးနေပါတယ်… ညကလဲ ၁၂ကျော်လောက်မှအိပ်တော့ စုစုပေါင်း အိပ်ချိန် ၃နာရီလောက်ပဲရှိပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ခရီးသွားမယ်ဆို စိတ်လှုပ်ရှားတတ်ကြတာပဲ မဟုတ်လား… ဒါတောင် နိုးနိုးချင်း ကွန်ပြူတာဖွင့်ပြီး ဘလော့မှာ သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ပိုစ့်ကောက်တင်လိုက်ပါသေးတယ်…
သူငယ်ချင်းကို မနက် ၅နာရီအရောက်လာခဲ့ဖို့မှာထားပင်မဲ့ ကြီးတော်က နောက်ကျပါတယ်… မနက် ၄နာရီကျော်ကျော် ကျွန်မ ရေမိုးချိုးပြီး ဖုန်းဆက်တော့မှ အိပ်ချင်မူးတူးအသံနဲ့ ငါလဲနိုးနေပြီ ပြောပါတယ်… ၅နာရီခွဲလောက်မှာရောက်ချလာပြီး လေဆိပ်ကို မနက် ၆နာရီလောက်ရောက်ပါတယ်…
ကိုယ်က Luggage အပိုမ၀ယ်ထားတော့ ချက်အင်ဝင်ရုံပါပဲ… ချက်အင်ကလဲ Online check in ၀င်ပြီးသားမို့ Boarding Pass သွားယူယုံပါပဲ… ခါတိုင်း ဆို hand carry အိတ်ကို မပြလဲ ရပင်မဲ့ ခုဆို လေဆိပ်ကလဲလည်သွားပါပြီ… ပြခိုင်းပြီး တံဆိပ်အပတ်လေးတွေတတ်ပါတယ်… တံဆိပ်မတတ်ထားတာဆို အလေးချိန်မစစ်ရသေးတာ အသိသာကြီးပေါ့… ကျွန်မအိတ်ကလဲ ဘယ်လောက်လေးမှန်းမသိပေမဲ့ သေချာတာတော့ ၁၀ကီလိုတော့ နည်းနည်းကျော်လောက်ပါတယ်… ဒါတောင် သွားခါနီးမှ အကျီင်္ ၂ထည် ထပ်ထုတ်လိုက်ပါသေးတယ်… အနွေးထည်ဆိုလဲ ၁ထည်ပဲ… ဖိနပ်ဆိုလဲ စီးထားတာ တစ်ရံနဲ့ နောက်ထပ် Sandal လေး တစ်ရံပဲ ထည့်ပါတယ်…. ဒေါက်တောင်မယူပါဘူး… တိုင်းကြည့်တော့ ၁၂ ကီလိုလောက်ရှိပါတယ်… ဒါပေမဲ့ အဲလောက်ပိုတာတော့ သူပေးပါတယ်… ဘာမှမပြောပါ… နောက် သူငယ်ချင်းဝင်တော့သူ့အိပ်အလေးချိန်ကို သူမကြည့်မိလို့ မသိလိုက်ပါဘူး… ချက်အင်အောင်မြင်သွားတော့ နောက်ကျနေမှာစိုးတာနဲ့ ကျွန်မတို့ အင်မီဂရေးရှင်းကို ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်…
ခု အသစ်ဖြစ်သွားတဲ့ အီလက်ထရောနစ်စနစ်ကို သိပ်သဘောကျပါတယ်… မျက်နှာတည်တည်ကြီးနဲ့ အရာရှိကြီးတွေနဲ့ တွေ့စရာမလိုတော့သလို ကျွန်မတို့ရဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ပတ်စပို့စာမျက်နှာလေးတွေမှာလဲ တုံးထုစရာမလိုတော့လိုပါပဲ… ချောချောချူချူပါပဲ… ပတ်စပို့ပထမဆုံးစာမျက်နှာလေးကို မှောက်ပြီး စက်ထဲထည့်လိုက်… (၁၀ဒေါ်လာရွက်တွေ ဘာတွေတော့ ပတ်စပို့ထဲ ညက်မနေစေနဲ့နော်)… စက်က Verify လုပ်ပြီးရင် ပထမတံခါးတစ်ချက်ပွင့်သွားမယ်… အထဲဝင်လိုက်… ပြီးရင် ညာဘက်လက်မကို (ဖုန်တွေဘာတွေ ကပ်မနေစေနဲ့နော်) သေသေချာချာလေး ဖိပြီး စက်ပေါ်တင်လိုက် (အရမ်းတော့ မဖိနဲ့ပေါ့နော်)… ခဏနေရင်နောက်တံခါးတစ်ချက်ပွင့်သွားမယ်… စိတ်ကို ချမ်းသာလိုက်တာ… ဘာချောကလက် ဘာအခွန်စာရွက် ဘာ D-form မှ မလိုဘူး…
Searching for Gate to Board
အားလုံးကျော်သွားပြီဆိုတော့ ကျွန်မတို့ဂိတ်ကိုရှာရပြန်ပါပြီ… ဂိတ်နံပါတ် D47 … ဂိတ်ကလဲ ဟိုးအဝေးကြီးမှာ… သူငယ်ချင်းက ပိုက်ဆံမလောက်မှာကြောက်လို့ လေဆိပ်မှာ စကာင်္ပူဒေါ်လာ ၂၀၀ ထပ်ထုတ်တယ်… ကျွန်မကတော့ အိပ်ဆောင် ၁၅၀ လောက်ပဲ သယ်သွားတယ်… လောက်မယ်လို့ယုံတယ်…
လေယာဉ်ပေါ်မှာ ထမင်းကျွေးမကျွေးတော့ မသေချာဘူး.. မနက်တည်းက ဘာမှမစားလာတော့ စားတော့စားချင်တယ်… အဲဒါကြောင့်လဲ သူငယ်ချင်းကို ၅နာရီအရောက်လာဖို့ လောခဲ့တာ… လေဆိပ်မှာ မုန့်စားဖို့… Starbuck တွေ့တော့ စားချင်တယ်… သူငယ်ချင်းက လေယဉ်ပေါ်မှာ ကျွေးရင်လဲ ကျွေးမှာပါဆိုလို့ နောက်ကျမှာစိုးတာနဲ့ ဆက်လျှောက်လာလိုက်တယ်… နောက်မှ သူက စားချင်လဲ စားလေး မိနစ်၂၀ လောက်တော့ အချိန်ရသေးတာပဲတဲ့… ဒါပေမဲ့ ရှာရမဲ့ ဂိတ်က ဘယ်လောက်ထိဝေးသေးလဲ မသိသေးတာကြောင့် ကျွန်မ မစားချင်တော့ဘူး… ပြီးတော့ သူပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မက စက်လှေကားပေါ်တောင်ရောက်နေပြီ…
ကျွန်မနဲ့ သူမရဲ့ အကျင့်
ဒီခရီးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့မှာ ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းရဲ့ အကျင့်လေးတွေကို သိထားဖို့လိုမယ်ထင်တယ်… သူမနဲ့ ကျွန်မသိတာ ၂၀၀၂ ရန်ကုန်မှာ YUFL တက်ကတည်းကပါ… အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းအုပ်စုပေါ့… ပြောင်ဖော်ပြောင်ဖက် လောင်ဖော်လောင်ဖက်တွေပါ… ဒါပေမဲ့ ခရီးတော့ မနှစ်ကအထိ တစ်ခါမှ မသွားဖူးပါဘူး… ဒီ ဟောင်ကောင်ခရီးမတိုင်ခင် အိမ်ကမိသားစုနဲ့ သူမနဲ့ Tioman resort နဲ့ Genting တော့ သွားဖူးပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ကျွန်မအစ်မက အားလုံးစီစဉ်သူဆိုတော့ သူစီစဉ်တဲ့အတိုင်းပဲ လိုက်ကြတာပါ…
ခု ဟောင်ကောင်ခရီးစဉ်ကတော့ သူမနဲ့ ကျွန်မတိုင်တိုင်ပင်ပင် ၂ဦးသဘောတူစီစဉ်ကြတာပါ… ကျွန်မကတော့ ဘယ်နိုင်ငံသွားမယ်ဆိုတာကို စတဲ့သူပေါ့နော်…
သူမအကြောင်းနည်းနည်းပြောရရင် ပထမဆုံးပြောရမှာက သူမက ချောတယ် ချစ်စရာကောင်းတယ် ဗွီဒီယိုထဲမှာလဲ တွေ့မှာပါ (မြှောက်ထားရတယ်… အဟိ)… ပြီးတော့ စိတ်ရှည် သည်းခံတတ်တယ်… သူမက ကိစ္စတစ်ခုကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ အရမ်းစဉ်းစားတယ်… သေချာမှလုပ်ချင်တယ်... တစ်ခါတစ်လေသူမ စဉ်းစားတော့မှ ကျွန်မသတိထားမိတာတွေရှိတယ်… ဥပမာ မကာအိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဟောင်ကောင် ဗီဇာကို ၂ခါဝင်လို့ရအောင် လျှောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုး… ပြီးတော့ သူမက ကြောက်တတ်တယ်… မိန်းကလေး ၂ယောက်တည်းသွားမှာဆိုတော့ ဟိုတယ်ကိုတော့ မြို့လည်ခေါင်က လူစည်ကားတဲ့နေရာမျိုးနဲ့ သန့်တဲ့ဟိုတယ်ပဲနေချင်တယ်… ဒါကြောင့် ဒီဟိုတယ်ကို ရီဗျူးတွေဖတ်ပြီး နေရာကြောင့် ရွေးဖြစ်သွားတယ်… ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သိပ်အတွေးလွန်ပြီး ဘာကိုမှ မြန်မြန်ဆန်ဆန်မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ သူမကြောင့် အချိန်တွေကုန်ပြီး အလုပ်မဖြစ်တာတွေရှိတယ်… တစ်ခုခုကိုလုပ်ပြီးလို့မှားမှာကို သူမကြောက်တယ်… မတော်လို့မှားသွားရင်လဲ ပါးစပ်ကနေ တစ်ဗြစ်တောက်တောက်နဲ့ နောင်တရလို့မဆုံးတော့ဘူး… “ငါတို့အမှန်ဆို ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာ…” အဲလိုမျိုးတွေ ထပ်ကာတစ်လဲလဲပြောတတ်သလို… တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ အခြေအနေနဲ့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အဆင်ပြေမှုမျိုးကိုတောင် ဆွဲထည့်စဉ်းစားတတ်သေးတယ်.. “ဒီနေရာမှာ ငါတို့မှာ အသိရှိနေရင် လွယ်ကူမှာ” (အသိရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ Scenario က ဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာလဲ သူလေကုန်ခံထည့်ပြောတယ်)…
ကျွန်မက ဒွိဟပွားနေတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ အချိန်ဆွဲနေတာကို မကြိုက်ဘူး… စိတ်မြန်လက်မြန် ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်… အဲလိုလုပ်လို့ တစ်ခါတစ်ရံ ကံဆိုးရင် အကွက်မစေ့တာတွေဖြစ်တတ်တယ်… ထစ်ကနဲရှိ စိတ်တိုတတ်တယ် ဒါပေမဲ့ ခဏနေတော့လဲ မေ့ပြီး ပြန်ပျော်ပျော်နေတယ်… ဘာလို့လဲဆိုတော့ စိတ်တိုနေတဲ့အချိန်ကြာသွားရင် မပျော်ရပဲ နောင်တရမှာစိုးလို့… ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ လွန်သွားရင်လဲ နောင်တမရတော့ဘူး… လူ့ဘ၀တိုတိုလေးမှာ ဆုံးဖြတ်တာမှားလို့ နောင်တရနေရင် ပျော်ပျော်နေရမဲ့အချိန်တစ်ဝက်လျော့တယ်… ဒါပေမဲ့ သူမနဲ့သွားရင်တော့ ကျွန်မချည်းပဲ နေရာတကာဆုံးဖြတ်နေရင်မကောင်းတော့ တိုင်တိုင်ပင်ပင်လုပ်တယ်… သို့သော် သူမက အမြဲဒွိဟပွားနေတတ်တယ်… ကျွန်မက ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပြီးမှ မှားသွားပြန်ရင်လဲ သူမရဲ့ နောင်တရ ညဉ်းတွားနေသံက ကျွန်မကို အပြစ်တင်တာမဟုတ်ပင်ပဲ့ ကျွန်မက အပြစ်ရှိသလိုခံစားရတယ်… ဒီတော့ ကျွန်မကလဲ မဆုံးဖြတ်ပေးချင်ဘူး… (စိတ်ထဲတော့ တစ်ခါတစ်ခါ အတော်အသည်းယားတယ်)… စိတ်တိုရင်တော့ ကျွန်မက ရှူးရှူးရှဲရှဲဒေါသထွက်တတ်တယ်… သူမကတော့ အဲဒါကို သည်းခံနိုင်တယ်… ကျွန်မတို့ ၂ယောက်ရဲ့ မတူတဲ့ Type လေးပေါ့…
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ ၂ယောက်လုံးရဲ့တူတဲ့အချက်လေးနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့အချက်လေးကတော့…
တစ်နေရာရောက်လို့ ကိုယ်ကြိုက်တယ် ပျော်တယ်ဆိုရင် နောက်လုပ်ရမှာတွေ သွားရမှာတွေ မေ့ပြီး အဲဒိနေရာမှာပဲ ပျော်ပျော်ကြီးကို အချိန်ဖြုန်းတတ်ကြတယ်…
ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီဟေ့ဆိုလဲ ၁နေရာတည်းမှာပဲ ၁၀ပုံလောက် မကြိုက်မချင်း မပြီးနိုင် မစီးနိုင် ရိုက်ကြတယ်…
မနက်နိုးတာနဲ့ ၂ယောက်သား အပြင်ထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်တာ ၁နာရီခွဲလောက် အမြဲအချိန်ကြာတယ်…
ညဘက်အိပ်ရင် အခန်းထဲမှာ ၂ယောက်လုံး တီဗွီဖွင့်အိပ်တယ်… (ကျွန်မကတော့ ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်ရတာကြိုက်လို့ ကြည့်ရင်းအိပ်ပျော်သွားတာ.. သူမကတော့ ကြောက်လို့)…
ဟောင်ကောင် မင်းသားတွေကြိုက်တယ်… (ဟိဟိ)
အချုပ်ပြောရရင်တော့ သူနဲ့ကျွန်မ ဒီခရီးစဉ်မှာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး စိတ်တိုတာတွေရှိခဲ့ပင်မဲ့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးနားလည်ပေးတယ်… သည်းခံပေးတယ်… တစ်ယောက်လုပ်ချင်တာကို နောက်တစ်ယောက်ကလိုက်လျောပေးတယ်… ဘယ်တော့မှ ပြဿနာမတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတာ နှုတ်ဖျား သကာလူးပြီး ဟန်ဆောင်နေရလို့ပဲဖြစ်မယ်… မိသားစုဝင်ချင်းတောင် တစ်ခါတစ်လေ ရန်ဖြစ်တတ်သေးတာပဲ… လူတစ်ယောက်အကြောင်းသိချင် ခရီးတူတူသွားကြည့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ခုခရီးစဉ်လေးက သူမနဲ့ ကျွန်မရဲ့ ကြာရှည်နေတဲ့ ခင်မင်မှုမှာ ကျွန်မ မသိခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ အကြောင်းတွေ အကျင့်တွေကို ပိုသိလာပြီး သံယောဇဉ်ပိုခိုင်မာလာတယ်လို့ ယုံကြည်တယ်…
ကဲ ခရီးသွားပိုစ့်ရေးတာ သူငယ်ချင်းအကြောင်း ၀တ္တုတိုဖြစ်တော့မယ်.. လိုရင်းဆက်မယ်…
အသွားလေယာဉ်က အတော်ချောင်တယ်… နောက်ပိုင်းတွေဆို လွတ်နေလို့ သူများတွေ သွားအိပ်နေတဲ့သူတွေတောင်ရှိတယ်… ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ထမင်းမကျွေးဘူး … ဒီအခါ မနက်ကတည်းက မစားလာတဲ့ ဗိုက်တွေထဲ Iron Cross တီးဝိုင်းက နေရာယူနေပြီ… လေယာဉ်စီးရင် ဗိုက်ပြည့်မှ မမူးတတ်တဲ့ ကျွန်မလဲ အားမျော့မျော့ပဲရှိတော့တယ်… ဒါနဲ့ ၂ယောက်သား Manu ကိုဖွင့်ပြီး မတန်မယန် လေပေါ်က ထမင်းနဲ့ အမဲသားဟင်း နည်းနည်းလေးကို SGD 10 နဲ့ Evian ရေဗူး အသေးလေးကို SGD5နဲ့ ၀ယ်စားသောက်ခဲ့ရလေသတည်း…
လေယာဉ် ၄နာရီစီးအပြီးမှာ ဟောင်ကောင်လေဆိပ်ကိုရောက်တယ်… နေ့လည် ၁၁နာရီ လောက်ရှိပြီ… ဒီတော့ သိပ်မအေးဘူး… စကာင်္ပူထက်တော့ အေးတာပေါ့နော်… လေယာဉ်ခ သက်သာလို့ဝယ်လိုက်ပင်မဲ့ အဲဒါ ဘက်ဂျက်လေယာဉ်မှန်းမသိခဲ့ဘူး… ခုတော့ ဘက်ဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်နေတော့ မြန်မာပြည်လိုပဲ ဘတ်စ်ကားကြီးနဲ့ သွားရတယ်… မြန်မာပြည်တောင် ခုဆိုတော်တော်အဆင့်မြင့်သွားပြီ Tunnel နဲ့… (၀မ်းသာစရာ)… ဟောင်ကောင် အင်မီဂရေးရှင်းကတော့ ရောက်ခဲ့ဖူးသမျှနိုင်ငံတွေထဲမှာ မြန်မာပတ်စပိုစ့်ကို သဘောထားအကြီးဆုံး နေရာပဲ… ဘာမှ အခက်အခဲမရှိဘူး… တစ်ခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ တန်းတူပဲ… ဘေးက ဥရောပကလာတဲ့ ကောင်တောင် ဘာတွေရစ်ခံနေရလဲမသိဘူး… ကိုယ်ကတော့ PASS…. ဟဲဟဲ… အောဖစ်ဆာကြီး အာဝါး………
လေဆိပ်ကကြီးတယ် လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွေရှိပင်မဲ့ စကာင်္ပူလောက် များများမထားတော့ တစ်ခါတစ်လေတော့ ဘယ်သွားရမှန်းမသိဖြစ်တတ်တယ်… အင်မီဂရေးရှင်း ကာစတန်ဖြတ်ပြီး ဘယ်အပေါက်ကထွက်ရင် ဘတ်စ်ကားဂိတ်နဲ့ နီးမှန်းမသိဘူး… နည်းနည်းမေးမြန်းပြီး နောက်မှ မျှားတွေ့လို့ထွက်လိုက်တာနဲ့ပဲ အဲဒိမှာ ဘတ်စ်ကားစီးဖို့ကဒ်ရောင်းတဲ့ ကောင်တာတွေ့တယ်… စကာင်္ပူမှာ ezlink card… ဟောင်ကောင်မှာ Octopus card လို့ခေါ်တယ်… အော်တိုပတ်စ် ကဒ်က ရထားဘတ်စ်ကား အားလုံးနီးပါးစီးလို့ရသလို 7-11 တို့လို ဆိုင်မျိုးတွေနဲ့ Vending machine တွေမှာလဲ အဲဒိကဒ်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်… စစ၀ယ်ချင် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁၅၀ ပေးရတယ်… ၅၀က စရန်… ၁၀၀က အထဲကတန်ဖိုး…
အွန်လိုင်းမှာရှာပုံအရ လေဆိပ်ကနေ ရထားစီးရင် Express mtr စီးရတဲ့အတွက် ဈေးကြီးတယ်တဲ့ ဒီတော့ ဘတ်စ်ကားစီးဖို့ထွက်လာလိုက်တယ်… ပိုက်ဆံသက်သာတာ မသက်သာတာထက် ငါတို့ ဒါလေးလုပ်တတ်ပါလားဆိုတဲ့ ခံစားချက်က စိတ်လှုပ်ရှားစေတာ… ဘတ်စ်ကားစီးရင်းရှုခင်းတွေလဲ ကြည့်လို့ရမယ်လေ…
လေဆိပ်ကနေ ကျွန်မတို့ဟိုတယ်ကို A21 ဘတ်စ်စီးရမယ်တဲ့… ဟိုတယ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီးမေးထားတာ… မိနစ် ၅၀လောက်ကြာမယ်တဲ့… ၂ထပ်ကားမို့ အပေါ်ကတက်စီးချင်ပင်မဲ့ ပါလာတဲ့ Luggage တွေ တင်မသယ်နိုင်တာနဲ့ အပေါ်မတက်တော့ဘူး… အဲဒိတော့မှ သူများတွေ Back pack နဲ့သွားတာကို သဘောပေါက်တယ်… လွယ်လွယ်ကူကူသယ်လို့ရတယ်… (နောက်မှ Back pack ကောင်းကောင်းတစ်ခုဝယ်အုံးမယ်.. Luggage ကြီးကို အမြန်မလိုက်တာ ကျွန်မလက်ခလယ် လက်သည်းရှည်ကြီး ဟိုးအတွင်းဆုံးက ကျိုးသွားလို့ သွေးတောင်ထွက်တယ်… နာလိုက်တာ လွန်ရော)… လေဆိပ်ကထွက်တဲ့ ဘတ်စ်ကားမို့ ဘတ်စ်ကားထဲမှာ အိတ်တွေတင်ဖို့ စင်လေးတွေ အောက်ထပ်မှာလုပ်ပေးထားတယ်… အိတ်စိတ်မချလို့ကိုယ်လဲ အောက်မှာပဲထိုင်လိုက်တယ်…
လေဆိပ်က Lantau Island ဘက်မှာရှိတာ ကျွန်မတို့သွားမှာက Kowloon ဘက်… Lantau Island ဘက်ကတော့ ပင်လယ်ပြာပြာရယ်တောင်တန်းတွေရယ်နဲ့ Kowloon ဘက်ဆိုင်ရင် မြို့ပြနည်းတဲ့ ရှုခင်းတွေတွေ့ရတယ်… ပင်လယ်နဲ့ တောင်ကပါးကြားတွေမှာ တိုက်ခန်းတွေဆောက်ထားတာကလဲ ဟောင်ကောင်ရောက်နေတဲ့ အမြင်တစ်မျိုးပဲ.. တံတားကြီးဖြတ်တော့လဲ လှတယ်… (ဒါတောင် ၂ယောက်သား အိပ်ရေးပျက် ပင်ပန်းပြီး ကားပေါ်မှာ ငိုက်နေသေးတယ်)
နောက်မှ သူနဲ့ကိုယ် ဗျာများရတာက… အမှန်တော့ ဘယ်ဂိတ်ဆင်းရမှန်းမသိဘူး… မြေပုံမှာတော့ ဟိုတယ်ရှိတဲ့ လမ်းထိပ်နားပဲ သိတာ… အပြင်မှာ ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကနေ ဟိုတယ်ကို မြင်ရချင်မှ မြင်ရမှာပေါ့… လေဆိပ်က ကိုယ်နဲ့ တူတူတက်လာတဲ့ အာမောတွေ(အဖြူကောင်တွေကို စလုံးစတိုင်နဲ့ခေါ်သည်) တောင်ဆင်းကုန်ကြပြီ… ဒီတော့မှ ၂ယောက်သား မြေပုံကြီး ဘတ်စ်ကားပေါ်ဖြန့် ဟိုကြည့်ဒီကြည့်တော့ ကျွန်မတို့ရောက်နေတာ Nathan Road ပေါ်မှာ ဆင်းရမဲ့မှတ်တိုင်ကလဲ အဲဒိလမ်းပေါ်မှာပဲ ဒါပေမဲ့ လမ်းက အရှည်ကြီး ဘယ်ဆင်းရမှန်းမသိဘူး… နောက်ဆုံးတော့ မမေးချင်ပင်မဲ့ ကားမောင်းတဲ့သူပဲသွားမေးရတာပေါ့… အင်္ဂလိပ်လိုတော့ အဲလူက သိပ်မတတ်ဘူး… ကိုယ်လဲ မြေပုံကြီးထိုးပြ တတ်သမျှ တရုတ်စကားနဲ့ပြောတော့ မရောက်သေးဘူးတဲ့… တော်သေးတယ် Mandarin တော့ နားလည်ကြပါတယ်… Cantonese လိုပဲနားလည်တယ်ဆို သွားပြီ….
နောက် ၃ဂိတ်လောက်နေတော့ သူကရောက်ပြီတဲ့… ဒီတော့ ၂ယောက်သားဆင်းလိုက်ရော… ဆင်းသာဆင်းလိုက်တယ် ၂ယောက်သား သောင်ပြင်လွှတ်တဲ့ နတ်သမီးလေး ၂ပါးလိုပဲ…. ဟတ်ဟတ်… ဘယ်ဘက်သွားရမှန်းမသိဘူး… မြေပုံကြည့်တာလဲ မသိဘူး… နောက်တော့ ထင်ရာဘက်ကို လျှောက်လိုက်တယ်… ပြီးမှ မြေပုံထပ်ကြည့်တယ်… မသိတော့လဲ မေးတယ်ပေါ့ရှင်… ဒီလိုနဲ့ ဟောတယ်ရှိတဲ့ Kimberley Road ကိုရောက်သွားပြီး ဟိုတယ်ကို ၁၂နာရီခွဲလောက်မှာ ရောက်သွားတယ်…
ဟော်တယ်ချက်အင် နဲ့ နေ့လည်စာ
လူတွေက ဟော်တယ်ထဲမှာ အများကြီးပဲ… ဟော်တယ်ကို ချက်အင်ဝင်တော့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အပိုကုန်စရာတွေရှိလာတယ်… အဲဒါတွေက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဝန်ဆောင်ခနဲ့ HKD1000 deposit ပေးရမယ်တဲ့… ပြန်တဲ့နေ့မှ ပြန်ထုတ်ပေးမယ်တဲ့… ကျွန်မတို့က ရှော့ပင်းထွက်ဖို့ယူလာတဲ့ပိုက်ဆံတွေ ပဲ့ပါကုန်တာပေါ့… မိန်းမများထုံးစံအတိုင်း မလောက်မှာစိုးတာပေါ့… ပထမတော့ ပေးလိုက်ပြီး ချက်အင်ဝင်လိုက်တယ်… အောင့်သက်သက်ပေါ့…
အခန်းက ၂နာရီမှ ရမယ်ဆိုတော့ နေ့လည်စာကို ဟိုတယ်ရှေ့က ဆိုင်လေးမှာ သွားစားကြတယ်.. အမဲသားအာလူး ငရုပ်သီးပွအိုးပူဟင်း… မွှေးပြီးစားကောင်းတယ် အမဲသားကလဲ နူးအိနေတာပဲ… ဟင်းချည်းပဲက HKD 72… အားလုံးပေါင်းတော့ နေ့လည်စာထမင်းစားတာ HKD96 ကျတယ်… ၂ယောက်စားတာ ဟင်း၁မျိုးထဲနဲ့ ဆိုင်ကလဲ သာမာန်ဆိုင်လေးကို စကာင်္ပူဒေါ်လာ ၁၆ လောက်ကျတယ်… ဒါဆိုရင် ဟောင်ကောင်ကစားသောက်ဆိုင်တွေ စကာင်္ပူထက် နည်းနည်း ဈေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်…
အခန်းရပြီးတော့မှ ၂ယောက်သား နည်းနည်းပါးပါး ပြင်ဆင်ပြီး နေ့လည် ၂နာရီကျော်နေပြီဆိုတော့ ပထမဆုံး The Peak ကိုသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…
The Peak သို့
ကျွန်မတို့ ဟိုတယ်က Tsim Sha Tsui MTR နဲ့နီးတယ်… အဲဒိကနေ The Central ကိုစီးရမယ်… ရထားလိုင်းတွေကများတော့ ယောင်ဝါးဝါးပဲ… ပါးစပ်ပါရွာရောက်… မေးလိုက်တော့ ရသွားတယ်… သွားရမှာက Hong Kong station ထင်တာပဲ ဒါပေမဲ့ ရထားပြောင်းရမယ်ထင်လို့ ပထမ The Central ကိုပဲမေးလိုက်တာ…
The Central ရောက်တော့ ရထားဘယ်လိုပြောင်းရမှန်းမသိဘူး… ဒါနဲ့ Hong Kong station ဆိုပြီးထိုးထားတဲ့ မျှားအတိုင်းလျှောက်လိုက်တာ Hong Kong Station ကို ရထားပြောင်းစရာမလိုပဲ ရောက်သွားရော… ဒါပေမဲ့ The Peak ဘယ်လိုသွားရလဲ မေးတော့… Central station Exit J ကထွက်ရမယ်ဖြစ်ပြန်ရော… ဒီတော့ လာလမ်းအတိုင်း ပြန်မြန်းရတာ ချေတွေကိုညောင်းရော…
ဘူဒါကနေ အဲဒိကို ၁၅ မိနစ်လောက်လမ်းထပ်လျှောက်ရတယ်… အဲဒိရောက်တော့ လူတွေအများကြီးပဲ… ဒီဘက်က Package လိုက်ရောင်းတဲ့ရုံကတော့ ချောင်တယ်… ဖယောင်းရုပ်ထု ပြတိုက်ရယ်၊ The Peak ပေါ်ရယ်၊ တောင်တက်တဲ့ Tram အသွားအပြန်ရယ်ကို HKD220 နဲ့ရပါတယ်… တစ်ခုချင်းစီဝယ်မယ်ဆိုရင် HKD240 လောက်ရှိပါတယ်တဲ့… အဲဒိ ၃ခုပေါင်းလက်မှတ်ကို ၀ယ်ပြီး ရထားစီးဖို့လူအုပ်နောက်ကိုရောက်သွားပါတယ်… တန်းစီနေတာလား တိုးတက်ရမှာလား သေချာမသိရပါဘူး… စီနေတဲ့ တန်းလဲ သေသေချာချာမရှိသလိုပါပဲ… ဒီတော့ ရှေ့က တရုတ်အုပ်စုတိုးတဲ့နောက်ကို ကိုယ်ကအသာလေးလိုက်သွားပါတယ်… လူအုပ်ကို ၃ပုံ ၂ပုံလောက်ကျော်လာပြီးမှ ကျွန်မနည်းနည်းသတိထားမိတာက သူတို့တန်းစီနေကြတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်… တခြားနိုင်ငံခြားသားတွေလဲ အများကြီးပါပဲ… သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းကို ရှေ့ဆက်မတိုးဖို့နဲ့ ဒီမှာပဲရပ်ပြီးတန်းစီဖို့ပြောဖြစ်သွားပါတယ်… တရုတ်အုပ်ကတော့ ဆက်ပြီး ကျော်တက်သွားပါတယ်…
ဒီလိုနဲ့ ဒုတိယမြောက်အစီးမှာ ကျွန်မတို့ပါသွားပါတယ်… ပြည်ကြီးတရုတ်တွေကတော့ ဘယ်လူမျိုးနဲ့ယှဉ်ယှဉ် သူတို့ အလုအယက်ပါပဲ… တိုးတာ တိုက်တာ အားမနာရှာမကျိုးလုပ်ရတာကို သူတို့မှာ အပြစ်ရှိတယ်လို့တောင် ယူဆပုံမရပါဘူး…
ကြိုးရထားက ၄၅ဒီဂရီမတ်တဲ့အထိ ဆွဲပြီး တောင်ပေါ်တက်တာပါ… စိတ်လှုပ်ရှားစရာတော့ကောင်းပါတယ်… တစ်ခါတစ်လေ အောက်က ဟောင်ကောင်မြို့ကို စောင်းမြင်ရပါတယ်…
ဖယောင်းရုပ်ထု ပြတိုက် (madame-tussauds)
ပထမပြခန်းထဲမှာတော့ ဟောင်ကောင် သရုပ်ဆောင်တွေ ထိုင်ဝမ်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင် အနည်းငယ်ရှိပါတယ်… ဂျက်ကီချမ်းရုပ်ထုနဲ့ ရိုက်ချင်ရင်တော့ အ၀င်ဝမှာသူတို့ ကင်မရာနဲ့ရိုက်ပေးပြီး ကြိုက်ရင်ရွေးရပါတယ်… ဒီတော့ မယူခဲ့ပါဘူး… လူတွေက အထဲမှာများတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ စိတ်အနှောင့်အယှက်နည်းနည်းဖြစ်ရပါတယ်… ပြီးတော့ အခန်းတွင်းမှာ နည်းနည်းမှောင်ပြီး ကိုယ်ကလည်း flash ထည့်မရိုက်ချင်တော့ အခက်နည်းနည်းတွေ့ပါတယ်… ဒီကြားထဲမှာ လူမှုရေးနားမလည်တဲ့ ပြည်ကြီးသူ ပြည်ကြီးသားများက တန်းစီရကောင်းမှန်းမသိ… သူများရိုက်နေရင် ဖြတ်မလျှောက်ပဲ နောက်ကပတ်သွားဖို့ နားလည်မှုမရှိ… ကိုယ်ရိုက်ဖို့ တစ်ဖက်မှာအိုက်တင်လုပ်နေလဲ ဟိုဘက် တစ်ဖက်ကနေ အတင်းဝင်တိုးရပ်ပြီးရိုက်လို့ ကိုယ်က အလျော့ပေးလိုက်ရတာမျိုးနဲ့ အချိန်တွေလဲ မကုန်သင့်ပဲကုန်ခဲ့ပါတယ်…
ကိုယ်ရိုက်နေတာကို ကလေးက ဖြတ်လျှောက်လို့ လူကြီးကပြောမလားလို့ကြည့်လဲ အဲဒိလူကြီးကပါ ဖြတ်လျှောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုတောင်ပိတ်စကားရပ်ပြောနေလိုက်သေးပါတယ်… အဲဒိအချိန်မှာ ကျွန်မစဉ်းစားမိတာကတော့ လူမျိုးဂုဏ်စောင့်ဖို့ တစ်ဦးချင်းစီမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ… သူတို့ ပြည်ကြီးတွေက ငါဒါလုပ်လိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပင်မဲ့… ခုလို နိုင်ငံပေါင်းစုံ လူမျိုးပေါင်းစုံရှိတဲ့ နေရာမှာ တခြားလူမျိုးတွေအားလုံး ၀ိုင်းပြီး နှာခေါင်းရှုံ့ချင်ပါတယ်… ဟောင်ကောင်နိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင်တောင် ပြည်ကြီးတရုတ်တွေကို မကြိုက်လို့ ဆန္ဒပြနေတာ လေဆိပ်ကအလာ ဘတ်စ်ကားပေါ်ကနေ လှမ်းတွေ့လိုက်ပါသေးတယ်… (ဒါနဲ့ ဒီသီတင်းလေးကို စိတ်ဝင်စားရင်ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်… ကျွန်မအပို လုပ်ကြံရေးတာမဟုတ်ကြောင်း သက်သေပါ… http://www.asiaone.com/News/AsiaOne%2BNews/Asia/Story/A1Story20120126-324108.html) ဒါတောင် ကိုယ်လဲ သူတို့အလစ်ထိကို စောင့်ပြီး ရအောင်ရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်….
ဒုတိယဟောခန်းမှာတော့ ဂျက်လီတို့ ဒိုင်ယာနာတို့အပြင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အများအပြားနဲ့ ရှေးခေတ်နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံရှိပါတယ်… အဲဒိအချိန်မှာတော့ မောကလဲမောနေ ကင်မရာကလဲအားကုန်ချင်ဖြစ်နေတာနဲ့ လျော့ရိုက်လာပါတယ်…
တတိယအခန်းမှာတော့ အားကစားသမားများ ဒေဗစ်ဘက်ဟမ်းတို့ တိုက်ဂါးဝုတို့ လေဒီဂါးဂါး မက်ဒေါနားနဲ့ တခြားအဆိုတော်တွေရှိပါတယ်… အဲဗစ်ပစ်စလီ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် တော်တော်လေးတော့ များပါတယ်… ပြီးတော့ သူတို့ဟောင်ကောင်နာမည်ကြီးမင်းသမီး အဆိုတော်တွေလဲရှိပါတယ်…
များလွန်းလို့ အကုန်မရိုက်တော့ပဲ ကိုယ်သဘောကျတဲ့သူလောက်နဲ့ အိုက်တင်လုပ်လို့ကောင်းမဲ့လူပဲရိုက်ပါတယ်… အချိန်ကလဲ ပထမဟောမှာတင် အတော်ကုန်သွားတော့ နောက်ပိုင်း အမြန်ပါပဲ… ကိုယ်က The peak ပေါ်လဲ မတက်ရသေးဘူးလေ…
ဖယောင်းပြတိုက်ကို အရင်ဝင်တာကတော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းက The Peak က ညဘက်ပိုလှတယ်လို့ပြောလို့ပါ… မီးတွေထွန်းတော့ ကြည့်လိုိ့ပိုကောင်းတယ်တဲ့…
(ဗွီဒီယိုထဲမှာ မပါတဲ့ပုံတွေပဲ အသားပေးတင်ပါတော့မယ်... အိုဘားမားပုံတော့ ကြိုက်လို့ ဒီမှာလဲ ထပ်တင်လိုက်တယ်)
ဟောင်ကောင်ဆို ဘရုဆလီ မပါမဖြစ်
red carpet မှာ သူငယ်ချင်း Nicole နဲ့ အတူ
ဘေယောင်ဂျင်းကြီးတော့... ရှားရှားပါးပါး အဲဒိမှာ ၁ယောက်တည်းသော ကိုရီးယားမင်းသား
အား... ထင်သလိုမဟုတ်ဘူး.. ဟီးဟီး (နောက်တာနော်)
ငါနဲ့သာတွေ့လိုက်ရင် ခုလို သေဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး... သူ့အတွက် ယောကျာင်္းရှာပေးလိုက်မှာ...
ခုလို တခဲနက် အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို လေးစားပါတယ်
Go getacouple of copy to pay tax at Embassy and to go back my country
ည ၇နာရီလောက်ကျတော့မှ The Peak အပေါ်ကို တက်ခဲ့ပါတယ်… ရာသီဥတုက အရမ်းအရမ်းကို အေးပါတယ်… မြန်မာပီပီ ညှက်ဖိနပ်စီးလာတဲ့ ကျွန်မတို့ ၂ယောက်အတွက် ခြေထောက်လေးတွေက ထားရက်စရာတောင် မရှိပါဘူး… လက်တွေအေးလွန်းလို့…. ကျွန်မယူလာတဲ့ လက်အိပ်တစ်စုံကို သူငယ်ချင်း ၂ယောက် တစ်ယောက်တစ်ဖက် မျှဝတ်ထားရပါတယ်… အပူပိုင်းက လာတဲ့ ၂ယောက်မို့ ပိုမခံနိုင်ဘူးထင်ပါ့…. အပေါ်ကနေ ရသလောက် ကျွန်မ Panorama shoot ရိုက်လာပါသေးတယ်… ကြည့်လိုက်နော်…
ပြီးတော့ The peak signboard နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်မလို့ သေချာ Stand လဲထောင်ထားတယ်… self timer ပေးပြီး သူငယ်ချင်း ၂ယောက်ရိုက်မယ်အလုပ်မှာ Timer ပြည့်ခါနီး ၂စက္ကန့်လောက်မှာမှ အဲဒိပြည်ကြီးကလေးတစ်ယောက်(သိပ်လဲမငယ်ပါဘူး) က ပြေးဝင်လာပြီးနောက်မှာလာရှုပ်ပါတယ်… ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိဖြစ်ရပါတယ်… လူကြီးတွေလဲ အဲနားမှာရှိပါတယ်… ဘာမှမပြောပါဘူး.. မလုပ်သင့်မှန်းတောင် သိပုံမရပါဘူး… အဲဒိပုံကို မှတ်မှတ်ရရမို့ ဖြတ်တောင် မဖြတ်ခဲ့ပါဘူး…
The Peak ကအပြန်မှာ ဗိုက်ဆာနေလို့ အဲဒိက စားသောက်ဆိုင်မှာပဲ ညစာဝင်စားခဲ့ပါတယ်… လူကပင်ပန်းနေတော့ အီတာတွေမစားချင်တာနဲ့ ၂ယောက်သား အမဲသားခေါက်ဆွဲပြုတ်ပဲ သောက်ဖြစ်ပါတယ်… ကံဆိုးစွာပဲ စားမကောင်းပါဘူး…
အရင်က ဟောင်ကောင်ကို အာရှမှာ ၀န်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးနိုင်ငံလို့ နာမည်ကြီးခဲ့တာကို ကျွန်မတို့ အတွေ့အကြုံအရ သိပ်လက်မခံချင်ဖြစ်မိပါတယ်… စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ မှာရင် အော်ဒါယူချင်သလို မယူချင်သလို… မုန့်လာချပြီး ဇွန်းမပေးပဲ နောက်မှ လာပြစ်ပေးတာမျိုးတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်… ဒါက ကျွန်မတို့ အတွေ့အကြုံအရပြောခြင်းသားဖြစ်ပါတယ်… ကိုယ်ပဲ ကံဆိုးခဲ့လားတော့ မသေချာပါဘူး…
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်မတို့ ၂ယောက် ဟိုတယ်ကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်… ဟိုတယ်မှာရေသန့်ဈေးက အပြင်ကထက် ၅ဆလောက်ဈေးကြီးလို့ အပြန်မှာ ရေဗူးဝင်ဝယ်ပြီး အခန်းထဲရောက်တော့ ၂ယောက်သား သန့်စင်ပြီး အိပ်လိုက်ကြတာ ခလောကနဲ…
Posted by mabaydar at 2:15 AM
Love it. Your editing idea is so great. Btw, ur friend is xoooooo beautiful! :P
2/10/2012 1:58 AM
Now, I know u two xooo fall in love the Chinese people from main land . Haaaaaa Haaaaa! How u eat Cantonese food :lol I hate to eat the food with " kaw Yae" :lol
2/10/2012 2:06 AM
Thanks for the comments. Yeah she is beautiful... :)
Cantonese food we ate doesn't really have Kaw yae... it's not bad... just that sometime too light taste I mean Not enough salty.
love the photo with Obama, being bossy :P xoxo